UHabakuki Isingeniso: Kutheni UThixo Evumela Ukungabi Nabulungisa?
Unqulo & Umoya Inkolo yamaKrestu
Hamba ngokuvumelana nokungabi nabulungisa kule Ntshayelelo kaHabakuki
Incwadi yeTestamente Endala kaHabakuki, ebhalwe iminyaka engama-2 600 eyadlulayo, yile enye incwadi yeBhayibhile yasendulo echaphazelekayo kubantu namhlanje.
Enye yeencwadi zabaprofeti abancinci , uHabhakuki ubhala ingxoxo phakathi komprofeti noThixo. Iqala ngoluhlu lwemibuzo enzima ibonisa ukungathandabuzeki okukaHabakuki kunye nokukhathazeka ngenxa yobubi obungacatshangwanga kuluntu.
Umbhali, njengamaKristu amaninzi anamhlanje, akakwazi ukukholelwa oko akubonayo ejikelezayo.
Ubuza imibuzo eqinileyo kwaye ekhombise uThixo . Kwaye njengabantu abaninzi namhlanje, uyazibuza ukuba kutheni uThixo olungileyo engeneleli.
Kwisahluko sokuqala, uHabhakuki usondela ngqo kwimicimbi yobundlobongela nokungabi nabulungisa, kubuza isizathu sokuba uThixo avumele ukuthukuthela okunjalo. Abangendawo bayanqoba xa iindaba ezilungileyo zihlupheka. UThixo uyaphendula ukuba uvuselela amaKaledi ambi, elinye igama lamaBhabhiloni , eliphela ngegama elingenasiphelo elithi "amandla abo unkulunkulu wabo."
Ngoxa uHabhakuki evuma ilungelo likaThixo lokusebenzisa iBhabhiloni njengesixhobo sakhe sokuhlwaywa, umprofeti ukhononda ukuba uThixo wenza abantu njengentlanzi engenakunceda, kwintsimi yesizwe esinenkohlakalo. Kwisahluko ezimbini, uThixo uphendula ngokuthi iBhabhiloni lizikhukhumeza, ngoko lilandela enye yezivakalisi ezibalulekileyo zeBhayibhile yonke:
"Ilungisa liya kuphila ngokholo lwakhe." (Habakuki 1: 4, NIV )
Amakholwa kufuneka athembele kuThixo , kungakhathaliseki ukuba kwenzekani. Lo myalelo wawufaneleke ngakumbi kwiTestamente Endala ngaphambi kokuba uYesu Kristu eze, kodwa waba ngumxholo wokuphindaphinda umpostile uPawulos kunye nomlobi wamaHebhere eTestamente Elisha.
Emva koko uThixo uqalisela kwiintlanu ze "maye amazwi" malunga namaBhabhiloni, ngalinye liqulethwe ngxelo yesono sabo elandelwa isijeziso esizayo. UThixo uyalahla ukuhaha, ubudlova kunye nokukhonza izithixo, ethembisa ukuba bahlawule.
UHabakuki uyaphendula ngomthandazo omude kwisahluko sesithathu. Ngamazwi amaninzi, uphakamisa amandla eNkosi, enikela umzekelo emva kobukhosi bukaThixo obungenakugwenxa phezu kweentlanga zomhlaba.
Ubonisa ukuzithemba kumandla kaThixo okulungisa zonke izinto ngexesha lakhe.
Ekugqibeleni, uHabhakuki, owaqala incwadi ngokukhungatheka nokulila, iphelela ngokuvuya eNkosini. Uthembisa ukuba kungakhathaliseki ukuba izinto ezimbi zifika njani kwaSirayeli, umprofeti uya kubona ngaphaya kweemeko aze azi ukuba uThixo unethemba lakhe eliqinisekileyo.
Phakathi kuka-612 no-588 BC.
Abantu bobukumkani basemazantsi akwaYuda, kunye nabo bonke abafundi beBhayibhile.
Indawo yeNcwadi kaHabhakuki
Ubomi bunqabisa. Kwizimbini zombini kunye namanqanaba omntu, ubomi abukwazi ukuqonda. UHabakuki wayekhononda ngokungabi nabulungisa kuluntu, njengokunqoba kobubi ngenxa yokulunga nokungaqondisi kobudlova. Ngethuba sisoloko sibuhlungu ngezinto ezinjalo namhlanje, ngamnye wethu ukhathazeka ngeziganeko eziphazamisayo ebomini bethu, kuquka ukulahlekelwa , ukugula nokudumala . Nangona iimpendulo zikaThixo kwimithandazo yethu zingasenelisekanga, sinokumthemba ngothando lwakhe njengoko sibhekene neentlekele ezijongene nathi.
UThixo ulawula . Kungakhathaliseki ukuba izinto ezimbi zifumana njani, uThixo useya kulawula. Nangona kunjalo, iindlela zakhe ziphakamileyo ngaphezu kwethu ukuba asikwazi ukuqonda izicwangciso zakhe.
Sivame ukucinga ngento esiya kuyenza xa sasinguThixo, sikhohlwa uThixo uyazi ikusasa nendlela zonke izinto ziya kuvela ngayo.
UThixo unokuthenjwa . Ekupheleni komthandazo wakhe, uHabhakuki wayethembela kuThixo. Akukho mkhulu mkhulu kunoThixo. Akukho mntu ubulumko ngaphezu kukaThixo. Akukho mntu uphelele ngaphandle koThixo. UThixo ungummeli wobulungisa obugqithiseleyo, kwaye sinokuqiniseka ukuba uya kulungisa zonke izinto ngexesha lakhe.
Abalingisi abalulekileyo kwiNcwadi kaHabakuki
UThixo, uHabhakuki, umbuso waseBhabhiloni.
Habhakuki 1: 2
"Koze kube nini, Nkosi, kufuneka ndibize uncedo, kodwa awuphulaphuli?" (NIV)
Habhakuki 1: 5
"Jonga iintlanga uze ukhangele-uze uqhiphuke. Kuba ndiya kwenza into enyangeni yakho ongenakuyikholelwa kuyo, nokuba uthe waxelelwa. "(NIV)
"Kodwa ke ndiya kuvuya eNkosini, ndiya kuvuya ngoThixo wam uMsindisi." (NIV)
Izikhalazo zikaHabhakuki kunye nezimpendulo zikaThixo (1: 2 - 2:20)
Umthandazo kaHabhakuki kwaye uthembela kuThixo (3: 1-19)
> I-ESV Study Study Bible, iiWebroad Bible
> Ubomi beSifundo seBomi soBomi, iTyndale > Indlu > kunye neZondervan
Biography yeSt. Augustine
I-Pantheon e-Roma: Imbali Yakhe Impumelelo Yomandulo Yasemandulo
Yayiyini i-Donatism kunye neyiphi i-Donatists Believe?
Amalungelo amaKristu eMelika
Ukusuka KwamaNgqina KaYehova Kukholelwa Kukholelwa Kukholelwa Kukholelwa Kukho Okholelwa Kukholelwa KuThixo: Indlela Nesizathu Sokuhlangula
Indlela yokusebenzisa i-White White nge-Under-Wet Underpainting
Ngaba Sisono Sokufa KweMisa ngenxa yeMimoya emibi?
Imbewu Yokubonga: Ukunyuka kweeNkqubo yokuHluma
Imbali yePraint Life Still
Indlela yokuCwangcisa iProjekthi yePhuhliso lweMidlalo
Indlela yokusingatha umhlali weKholeji ukuba awuthandi
Iingqungquthela ezibalulekileyo zeAdam Metal
Apho uDancing Dancing evela khona
Iqonga, Abalingiswa, kunye neenhloko kwi "God of Carnage" nguYasmina Reza
Usesho lweSayithi olulula
3 I-World Real Exit Slips yoVavanyo loQeqesho
Indlela yokusebenzisa i-Hyphens kunye neDashes ngesiFrentshi
Ukubaluleka kweMfazwe yaseGettysburg
Usuku Luni Lungcwele?
Izinto ezine ezibeka amaMerika ngaphandle kunye nokuba kutheni zibalulekile
Iinkcukacha ezininzi zeGlyph
Biography yaseVictoria iHuerta
Ukufaka enye inxalenye ye Delphi kwiPhakheji ekhoyo
Iingoma kwiNtsingiselo yenzondelelo
I-T5 I-Slips yentela
UFumihiko Maki, umyili waseJapan weFomu kunye noKhanya
Indlela yokusebenzisa i-French Query Pronoun 'Qui' kunye ne 'Que'